[TopNews] Maxaa kajira in Ergayga garka ah IGAD u qaabilsan Somalia la safan yahay Farmaajo?
Monday December 07, 2020 - 13:42:31 in Wararka by Sahal Muqdisho
Waagacusub.com-Ergeyga gaarka ah ee IGAD u qaabilsan arrimaha Soomaaliya.Dr Maxamed Cali Guyo. ayaa lagu eedayay in uu la xirtay Maamulka Farmaajo ee Villa Somalia kana shaqeeyo rabitaankooda.
Ila Wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyaya in” Ergeyga gaarka ah ee IGAD u qaabilsan arrimaha Somalia. lacag laalusho bil walbaa Villa Somalia ugu qaato in uu ka aamuso oo uu marnaba ka hadal qaladaadka weyn, ee hadii laga sii aamusnaado duminayo nidaamka Dolwnimo.
Muddo sanadda waxaa uu ku sugan yahay Ergayga Magaalada Nairobi. Oo uu dhan ugu baxin iyaddoo muuqato in uu iska indha iyo dhaggo tiray, xaalada cakiran ee ka taagan Somalia. oo xili kala guura doorasho gashay. Ilo ka tirsan xafisyada besha calamka ayaa walac ad u weyn ka qaba amusnanta xafiska IGAD ee ku adan arimaha masiriga ah ee dalka Somalia, asago mudo sanad ah ka so dhex muqan dhaman shirarka besha calamka ee arimaha cakiran ee dorashoyinka Somalia.
Xaalada Soomaliya,ayaa sidaay ku socoto hadda maraysa meel halisteedda leh. kadib markii ay Musharaxiinta mucaaradka iyo maamul gobeedyada qaarkood kahor yimaaden guddiga doorasho ee Dowladda Federalka magacawday. Kuwaa oo uu badan saraakil katirsan Hay"adda Nabadsugida (NISA) cababasho ay soo gudbiyeena waxba laga qaban waayay. Taaso keentay in musharaxiinta mucaaradka dhankooda gudi ka shaqeeya doorashada soo magacabaan. iyadoo murankaasi la rumeysan yahay in uu ka imaanayo qalalaase dagaal hadaan laga heshiin.
Xafiiska IGAD oo shaqadiisa aheyd xalinta khilaafadka. ayaa waxaa muuqato in wakiilkii qaabilsana gaabiyay Shaqaddas. taaso ah nasiib darro weyn .
Sikastaba ha ahaatee, Dowladda Madaxweyne Farmaajo ayaa noqotay Dowladii ugu Musuq Maasuqqa badnayd ee Somalia .soo marta tan iyo wixii ka dambeeyay bur burkii Dowladda dhexe. Midas oo sababtey in ay ku kala irdheyan besha calamka lacago lalush ah.